Wax badan kabaro musharaxiinta u taagan Qabashada xilka Raiisul wasaaraha soomaaliya – idalenews.com
Wax badan kabaro musharaxiinta u taagan Qabashada xilka Raiisul wasaaraha soomaaliya
Muqdisho(INO)-Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu weli wadaa Latashiyo uu ku baadi goobayo Ra’isulwasaaraha Cusub ee Somalia, waxa uuna Dadaal xoogan ku bixinayaa sida uu ku heli lahaa R/wasaare ku fakir noqonkaro si Khilaaf looga badbaado.
La taliyayaasha Madaxweyne Xassan ayaa waxaa kamid ah Faarax Sheekh C/qaadir oo kaalinta koowad ugu jiray Mooshinwadayaashii kasoo horjeeday R/wasaarihii kalsoonida waayay.
Shabakadda Sahal News Online, oo dadaal dheeri ah ku bixisay wax ka Ogaanshaha Shaqsiyaadka ugu cadcad qabashada Xilkaasi ayaa waxaa inoo suuragashay helida Liiska soo socdo:-
Haabiil cabdi heybe aqoon yahan soomaaliyeed oo ku nool yurub
Bashiir Nuur Bidaar Musharax hore
Xuseen Cabdi Xalane, Wasiirka KMG wasaarada Maaliyada.
Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka.
Saciid C/llaahi Den, oo horey Wasiir Qorsheynta uga soo noqday Xukuumadii C/wali Maxa’ed Cali Gaas.
Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda.
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo Xubin firfircoon ka ah Baarlamaanka.
Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka.
C/laahi Ciilmooge oo Wasiir kasoo noqday Xukuumadii Shirdoon.
Sidoo kale waxaa jiro hadal heyn ku aadan Xubno kale oo iyaguna u sharxan Xilka R/wasaarenimo, inkastoo Madaxweyne Xassan uu xooga saarayo sidii uu shaqsiyaadkaani kor ku xusan uga soo dhex saari lahaa R/wasaaraha Cusub.
Arrinta la fili karo ayaa ah,ra’iisul wasaaraha cusub inuu ka imaan karo beelaha Leelkase, Majeerteen iyo Ogaadeen,balse ma jirto cid si rasmi ah u caddeeysay.
Ugu dambeyn,xoggaha aan heleyno ayaa sheegaya in madaxweynuhuu uu doonayo si dhaqso ah inuu ku soo magacaabo ra’iisul wasaaraha,maadaama ay waqti badan ku qaadatay soo magacaabistii ra’iisul wasaarihii hore.
DHAGEYSO: 3 Milyan oo Soomaali ah oo la sheegay inay heysatao xaalad nafaqo daro
Daawo Video:Munaasabad Lagu Taagyeerayey Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed soomaaliya Ee 3 Gobol Shariif Xasan Sheekh Aadan Oo lagu qabtey Magaalada Nairobo Ee Dalka Kenya.